ဘဝမှာ ငိုတလှညျ့ရယျတလှညျ့နဲ့ အခြိုးအကှတှေ့မြေားခဲ့တယျဆိုတဲ့ ထကျထကျမိုးဦး | Popular
October 29, 2020 Asian Fame
ကြော်ငြာဘုရာမ အဖြစ် ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးက စိန်ရွှေ လက်ဝတ်ရတနာ တွေကို live sale ရောင်းချမှုမှာလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေရတဲ့အတွက် နေ့စဉ်ရက်ဆက် အလုပ်တွေပြန်လုပ်နေရသူပါ။ ကိုဗစ်ကာလအတွင်း သူမရဲ့တကျော့ပြန်အောင်မြင်မှုတွေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက် သူမကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေလဲ ဝမ်းသာပျော်ရွှင်လို့နေပါတယ်။ အောင်မြင်မှု ကျရှုံးမှုတွေနဲ့အတူ လောကဓံတွေကိုလည်း ရင်ဆိုင်ကြုံတွေရတဲ့အခါမှာ မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးက နောက်ဆို ပရိသတ်တွေ မြင်ချင်သလိုအမြဲပြုံးနေမှာဖြစ်ကြောင်းကိုတော့…
“ထက်မငိုတော့ဘူးနော်။ပရိသတ်တွေက ထက်ကို မငိုပါနဲ့တော့တဲ့ ချစ်စရာကောင်းပြီး ပြုံးပြုံးလေးနေရမယ်နော်တဲ့။ ထက်လဲ ဘယ်ငိုချင်ပါ့မလဲ ဒါပေမယ့် ထက်ရဲ့ ဘဝမှာ အချိုးအကွေ့တွေများလွန်းတယ်။ ငိုတခါ ရယ်တလှည့်နဲ့ တခါတလေ ကိုယ့်ဘဝဇာတ်လမ်း ကိုယ်ပြန်ကြည့်နေရသလိုပဲ။
ဒီအကယ်ဒမီရုပ်လေး ၂ရုပ် ပြန်ကြည့်မိတိုင်း အကယ်ဒမီ ထက်ထက်မိုးဦး ရဲ့ပရိသတ်တွေ အများကြီး ရှိတယ်ဆိုပြီးတွေးလိုက်ရင် အားတွေရှိသွားရော။အနုပညာသက်တမ်းနှစ် ၃၀ ကျော်လုံး ထက်ဘေးမှာ အမြဲတမ်းရှိနေပေးခဲ့တာ အကယ်ဒမီရုပ် ၂ရုပ် နဲ့ ထက်ဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ အချိန်တိုင်းလက်ခံပေးနေတဲ့ ပရိသတ်ပဲ။ထက်မှာ ဘာမှပိုင်ဆိုင်မှုတွေ မရှိတော့ရင်တောင် ထက်ပရိတ်သတ်တွေ ရှိနေတယ်လေနော်…. ဒါကဘုရားပေးတဲ့ ဆုလာဘ်တခုပေါ့။
ထက်လည်း ခုထက် ပိုကြိုးစားမယ်နော်။ထက်ကိုလည်း ပိုချစ်ပေးကြပါ။ထက်ကြော်ငြာတာတွေကို လည်းအားပေးကြပါလို့ နော်…..”လို့ ဆိုပါတယ်။
ကွျောငွာဘုရာမ အဖွဈ ပရိသတျတှရေဲ့အခဈြတှကေို ပိုငျဆိုငျထားနိုငျတဲ့ ထကျထကျမိုးဦးက စိနျရှေ လကျဝတျရတနာ တှကေို live sale ရောငျးခမြှုမှာလညျး ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုတှရေတဲ့အတှကျ နစေ့ဥျရကျဆကျ အလုပျတှပွေနျလုပျနရေသူပါ။ ကိုဗဈကာလအတှငျး သူမရဲ့တကြော့ပွနျအောငျမွငျမှုတှကေိုတှရေ့တဲ့အတှကျ သူမကိုခဈြတဲ့ပရိသတျတှလေဲ ဝမျးသာပြျောရှငျလို့နပေါတယျ။ အောငျမွငျမှု ကရြှုံးမှုတှနေဲ့အတူ လောကဓံတှကေိုလညျး ရငျဆိုငျကွုံတှရေတဲ့အခါမှာ မကျြရညျကခြဲ့ရတဲ့ ထကျထကျမိုးဦးက နောကျဆို ပရိသတျတှေ မွငျခငျြသလိုအမွဲပွုံးနမှောဖွဈကွောငျးကိုတော့…
“ထကျမငိုတော့ဘူးနျော။ပရိသတျတှကေ ထကျကို မငိုပါနဲ့တော့တဲ့ ခဈြစရာကောငျးပွီး ပွုံးပွုံးလေးနရေမယျနျောတဲ့။ ထကျလဲ ဘယျငိုခငျြပါ့မလဲ ဒါပမေယျ့ ထကျရဲ့ ဘဝမှာ အခြိုးအကှတှေ့မြေားလှနျးတယျ။ ငိုတခါ ရယျတလှညျ့နဲ့ တခါတလေ ကိုယျ့ဘဝဇာတျလမျး ကိုယျပွနျကွညျ့နရေသလိုပဲ။
ဒီအကယျဒမီရုပျလေး ၂ရုပျ ပွနျကွညျ့မိတိုငျး အကယျဒမီ ထကျထကျမိုးဦး ရဲ့ပရိသတျတှေ အမြားကွီး ရှိတယျဆိုပွီးတှေးလိုကျရငျ အားတှရှေိသှားရော။အနုပညာသကျတမျးနှဈ ၃၀ ကြျောလုံး ထကျဘေးမှာ အမွဲတမျးရှိနပေေးခဲ့တာ အကယျဒမီရုပျ ၂ရုပျ နဲ့ ထကျဘာတှပေဲဖွဈခဲ့ဖွဈခဲ့ အခြိနျတိုငျးလကျခံပေးနတေဲ့ ပရိသတျပဲ။ထကျမှာ ဘာမှပိုငျဆိုငျမှုတှေ မရှိတော့ရငျတောငျ ထကျပရိတျသတျတှေ ရှိနတေယျလနေျော…. ဒါကဘုရားပေးတဲ့ ဆုလာဘျတခုပေါ့။
ထကျလညျး ခုထကျ ပိုကွိုးစားမယျနျော။ထကျကိုလညျး ပိုခဈြပေးကွပါ။ထကျကွျောငွာတာတှကေို လညျးအားပေးကွပါလို့ နျော…..”လို့ ဆိုပါတယျ။
Jewel – Sein Nan Daw
Makeup – April Thuta
Stylist – Patrick Hseng သဇငျပနျး – Hein Htet Wai Yan (Thazin Farm )
Photo – Li John
Designer – Minn Thet Saen
Location – Awei metta hotel ( punhlaing estate)
ပိတ်ပင်မှုတွေ ကြားထဲကနေ ရုပ်ရှင်ကို ဆက်လက်ရှင်သန်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ် ဦး ညွန့်ဝင်း
ဇာတိမြေ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဇာတ်ဝင်ခန်း အား မြို့တော်ခန်းမရှေ့နဲ့ ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ရင်ပြင်ပေါ်မှာ ရိုက်ကူး